Zororo muBocas del Toro Panama - Panama Villas | Bocas Bali
Nezve Nzvimbo Pedyo Yedu Panama Resort
Zvitsuwa 8 Zvinogarwa zveBocas del Toro Archipelago
VekuEurope, vekuSouth America, neveCentral America vaenda kuno zororo kwemakore, asi vashoma vekuAmerica vakanzwa nezveBocas del Toro, ndoda kushanya. Muimbi-munyori wenziyo wekuAmerica Jimmy Buffet anoshanda semusiyano sezvo ari pazororo muBocas del Toro nekufamba kwemakore.
Yave nguva yekuti vanhu vekuAmerica vakawanda vabatane nemafaro muparadhiso iyi yeCaribbean. Saka, zvingave zvakakodzera kubvunza, "Chii chaizoitwa naJimmy Buffet?"
Iyo Bocas del Toro Archipelago inoumbwa nezvitsuwa zvisere zvinogarwa uye anopfuura mazana maviri ezvitsuwa zvidiki zvemangrove zvakakwana pa kayaking.
Isla Colón ndiyo hombe uye inonyanya kufunga nezvechitsuwa chikuru muzvitsuwa. Pano unowana Bocas Town ine nhandare yendege yepasi rose-inopa ndege kubva kuPanama City neSan Jose, Costa Rica-chipatara chitsva, mahotera anoyevedza, maresitorendi, nemabhawa kuwedzera kuStarfish Beach, Bluff Beach, Paunch Beach, uye Bird Island.
Verenga zvakawanda nezveBocas Town
Rwendo rwekudunhu haruna kupera pasina kana kushanya kumwe chete kuCarenero. Ichi chitsuwa chidiki chinopisa chinogara zvakananga kumabvazuva kweBocas Town. Kukwira kwechikepe kwemaminetsi maviri kunoda madhora maviri-madhora mashanu echikepe chetekisi zvichienderana nenzvimbo yeCarenero yaunoda kuongorora.
Vagari venzvimbo nevashanyi zvakafanana vanonanga kwaBibi paBeach kuresitorendi yemvura inonaka kwazvo. Maonero aBibi aquamarine anoita kuti ive nzvimbo yakanaka yekushambira usati wadya kana mushure mekudya. Kana iwe uchikwira tekisi kuenda kuCarenero kwasviba, vashanyi vanowanzoenda kuAqua Lounge Bar & Hostel kuti vanakirwe nehotera uye kuona marambi eBocas Town mhiri kwemvura.
Vanoda kukwira vanofamba munzira yeCarenero yeperimeter yekuona zvinoyevedza uye mahombekombe. Zvichienderana nenguva yegore, kushambira kungave kusachenjera kumabvazuva kwechitsuwa, kumusha kune mukurumbira Carenero Point surf break. Mafungu emvura ari pamahombekombe akatarisana negungwa rakashama anogona kuva nengozi kana mafungu akakura.
Tekisi yemvura yemaminetsi gumi kubva kuBocas Town ichakuunza kuIsla Bastimentos, kumusha kune mamwe emahombekombe anoshamisa munzvimbo iyi. Chiteshi chezvikepe chiri padivi pemikoko pachitsuwa chacho. Vashanyi vanosungirwa kubhadhara madhora mashanu pamunhu kuti ashandise nzira inopera paRed Frog Beach inoshamisa. Muripo wacho wakanyatsokodzera nzira yakanyatsogadzirwa nemusango rakasvibira.
Red Frog Beach yakanakira kushambira, kurembera kunze kumabhawa eCaribbean, uye kunakidzwa mamaira emvura yakachena-yakachena uye jecha jena.
Kumaodzanyemba, Polo Beach ingangoita hafu yeawa kufamba kubva kuRed Frog Beach. Ingotevera mvura kuruboshwe kwako uye haugone kupotsa iyi idyllic snorkeling nzvimbo. Polo, mugara gomuwa, age kwa kere mosirugana sokuzuvhisa mosirugana sokuzuvhisa yipo 55 ogu ga kere nonomvhura 20. Nhasi, vashanyi vanowana Polo pane imwe imba iyi, kubika lobster, gakanje, hove, uye mupunga wekokonati. Lobster nemupunga wekokonati zvinodhura $15, uye Polo ichakuudza kuti, "Idya kusvika waguta." Isu tinozvidaidza kuti "zvese zvaunogona kudya lobster" muUS
Vafambi vanonanga kuWizard Beach yakavanzika, inowanzosvikwa nenzira yemusango kubva kudhorobha reOld Bank.
Kungopfuura kumucheto kwekumaodzanyemba kweIsla Cristobal iri Isla Frangipani, Bocas Bali chitsuwa chakazvimiririra. Kumadokero kweFrangipani uye kumahombekombe ekumaodzanyemba kwe Cristobal inogara Dolphin Bay Preserve. Rutivi rwekuchamhembe kwe Cristóbal ndiko kumusha purazi rine nzendo dzokutasva mabhiza.
Ichi chitsuwa che mangrove chipfupi chechikepe kubva kuBocas Town. Scuba divers uye snorkelers vanoda Isla Solarte's inonakidza coral reef, kusanganisira inozivikanwa Hospital Point dive saiti.
Chikamu chidiki chete chevashanyi kuBocas del Toro Archipelago vane mufaro wekusangana neIsla Popa. Kukwira maminetsi makumi matatu nechikepe kubva kuBocas Town, iyi paradhiso yakakodzera kushanyirwa kune vanoda shiri.
Pedyo nenyika, Isla Pastores, kana kuti Shepherds Island, ndicho chechipiri pazvitsuwa zvisere zvinogarwa zviri muboka rezvitsuwa. Iyi nzvimbo tsvene ine runyararo yakatumidzwa zita remuRungu aigara muno mukutanga kwema1800. Akavaka nzira yekutanga pakati peAlmirante neChiriqui Grande, iyo yakazove nzira huru.
Chitsuwa chega chisina pekugara, yakanaka Cayo Agua ndiyo iri kure kure neBocas Town saka vashanyi havanzwe zvakawanda nezvazvo. Kunyangwe zvishoma zvakanyorwa nezveCayo Agua pawebhusaiti, mahombekombe ayo ndiwo asina kubatwa zvakanyanya, akasiirwa kuti vashanyi vanonyanya kufarira vanakirwe.